Hordhac Ammaan iyo mahad idilkeed waxaa mudan Allaah, ka nabad ahaansho xumaan oo idil iyo Naxariis Allena korkiisa ha ahaato imaamkii Anbiyada iyo Rususha Nebigeennii Muxammad iyo ehelkiisii iyo asxaabtii dhammaantood. Allaah S. Waxay liibaanteena iyo maslaxadeena ay ku jirtana waa inaa arimaha noocaas fulino, oo aan ku dayano Nebiga, oo awaamirtiisa qaadano, wax yaabaha uu naga reebay dhamaantoodna aan ka tagno. Taasna waxay noqotay arin dhibaato badan keentay, waxayna dadka maalin walba doonayaan bal in laraadiyo qiil iyo waxaan diinta shaqo kulaheyn.
Hordhac Ammaan iyo mahad idilkeed waxaa mudan Allaah, ka nabad ahaansho xumaan oo idil iyo Naxariis Allena korkiisa ha ahaato imaamkii Anbiyada iyo Rususha Nebigeennii Muxammad iyo ehelkiisii iyo asxaabtii dhammaantood. Allaah S. Waxay liibaanteena iyo maslaxadeena ay ku jirtana waa inaa arimaha noocaas fulino, oo aan ku dayano Nebiga, oo awaamirtiisa qaadano, wax yaabaha uu naga reebay dhamaantoodna aan ka tagno.
Taasna waxay noqotay arin dhibaato badan keentay, waxayna dadka maalin walba doonayaan bal in laraadiyo qiil iyo waxaan diinta shaqo kulaheyn. Waxay dadkii garan la yihiin sida loo guursado. Waxay garan la yihiin habka gabadha guriga loo geeyo. Waxay garan la yihiin sida loola dhaqmo marka inanta guriga la geeyo. Xuquuqda zowjeeynka ay isku leeyihiin raga iyo dumarka in badan marka laga waramo dadka waxay u qaadanayaan wax adag, oo aan la sameyn karin, diintiinta islaamkana lagu atkeeyey. Waxa la sheegayanna waa nasuus kaliyah.
Marka bacdamaa ay dadku halkaas taaganyihiin, waxaa nafsadayda iyo muslimiinta kalaba ugu nasteexey nayaa dhowrkaan arimood: Waa inaa Rabbi kabaqanaa marka ugu horeysa.
Waana inaa nafsadeena ku qasabno wax walba oo Alle noodiray in aan nala ka weyn haba karaahiyeysato nafsadeenee. Wax kastoo Alle naga reebayna aan nala ku arkin. Waana inaa nafsadeena ku qancino sunadda Nebiga mooyaane wax kaloo maslaxo noogu jirto in aan la arag. Waxa igu Kalifay inaan Kitaabkan Qoro Waxaa igu kalifay inaan kitaabkaan qoro dhowr qodob, oo kamid ah: Qodobka 1aad: Waxaan Alle SW karajaynayaa inuu ka dhigo qayb muhiim ah, oo ka mid ah meelaha aan ajarka ka helayo, waa haddii aan noolahay iyo haddii aan dhintaba.
Qodobka 4aad: Sidoo kale, dad badan oo waxaa jira doonaya inay guursadaan, oo masruufkii inanta diyaar la ah, laakiinse aan arkin qof qanciya xaga diinta, iyo xaqa aqlaaqda. Gallada iyo towfiiqda Allaha ummada soomaaliyeed waafajiyo.. Nebiga SCW wuxuu yiri..? Dhalinyarooy, haddaa masruufi kartaan haweeney, kiinii masruufi kara haguursado, maxaa yeelay Indhahana wuu kaa laabayaa farjigana wuu kuu xifdinayaa..?
Markaasey, waxay yiraahdeen:? Saddexdoodii midkood wuxuu yiri: Habbeen kasta waan soojeedayaa oo waligay seexan maayo, oo salaadbaan utaagnaan,? Kii labaadna wuxuu yiri: Waligey waan soomayaa, oo afuri maayo..? Kii saddexaadna wuxuu yiri: Aniga iyo dumar waan kala tagnay, oo waligeey guursan maayo.? Kolkii Nebiga SCW loo sheegay bari buu ka noqday, wuxuuna yiri: Anaa Ilaahey ugu cabsi badan xagga ummadayda, waana soomaa, waana afuraa, waan seexdaa, waana soo toosaa, dumarna waan guursadaa, ninkii sunnadayda kaleexdana ummadayda kama mid ma?
Nebigu wuxuu kaloo ku booriyey ummada markay guursanayaan inay guursadaan haweenka firkeeda lagu ogyahay inay caruur dhalaan, ama firkeedu nimanka jecelyihiin. Sideebaa lagu ogaanayaa? Waxaa culumadu yiraahdaan waxaa lagu ogaanayaa in firkeeda la? Wuxuuna Nebiga SCW yiri:? Waxaad guursataan haweeneyda, inay zowjka jecelyihiin ama firkeeda lagu ogyahay inay caruur dhalaan, waayo aakhiro ayaan ummadaha kale idin kugu faanayaaye xaga tirada.?
Sacad Ibnu Abii Waqaas ayaa wuxuu yiri:? Saddex hadduu qofku helo wuxuu helay adduunyo raaxadeedii.? Saddexdaasna waa: Haweeney wanaagsan, oo diinta kuugu kaalmeysa. Guri wanaagsan, oo diinta Ilaahey kuugu saacida. Iyo Gaadiid wanaagsan, ee gaari markaa ladhaqaaqdidba gaari kale hoosta ka galayaa, kaasi gaadiid wanaagsan ma? Qofkaa Guursanaysid iska Eeg Nebigu SCW wuxuu inagala taliyey, oo fikrad nagasiiyey haweeneyda aad guursanaysid ama haweeneydu ninka ay guursanayso inta aysan isguursan inay iska eegaan.
Xadiis xasan ah Nebigu wuxuu ku yiri:? Candhuuftiina meel u dayda.? Yacni ka fiirsada qofka aad guursaneysaan intiina guursan ka hor. Xadiis saxiix ah oo Bukhaari iyo Muslim ku jira Nebigu wuxuu yiri: Dumarka afarbaa loo guursadaa, xoolaheeda, quruxdeeda, diinteeda, Markaasuu wuxuu yiri markuu intaa sheegay: War gacantaada ha carowdee mida diinta leh gacanta ku dhig, oo raadso, oo qabso. Markii diintu aruurisay raga maskaxdooda waxa ku jira afarbaa ubadan, qaar wax kale ku guursada waa dhici kartaa, laakiin afartaasbaa ubadan raga maskaxdiisa, ee mida diinta usaaxiibkaa gacanta ku dhig, oo yayna idin ka fakan.
Walaalayaal diinta ma diidana inaa naag qurux badan raadsatid, ama mid lacag leh, ama mid qabiil caan ah ka dhalatay, laakiin waxay ku leedahay diintu aasaas waxaa u ah guurka: Mida diinta leh, ayadaana ku anfacaysa. Waxaa kaloo sugnaatay Nebiga SCW inuu raga iyo dumarka ku booriyey inay iska eegaan ruuxay guursanaayaan, wuxuuna Nebiga SCW yiri: Iska eega haweeneyda ama ninka maxaa yeelay waxay taasu keenaysaa wada joogidiinu inay sii daa?
Iska eegidu waxay keenaysa inay sii dheeraato wada joogidiinu, oo aan furitaan iyo cilad ayna soo bixin, oo hadhow gabadhiina ayna dhihin: Ninkaan anigu saan ma moodayn.? Ninkuna uusan dhihinin:? Gabadhaan saan ma? Yacni inuu xeeladeystay siduu ku arki lahaa gabadha uu guurka ka rabey.
Yaa isku dhigma..? Waxaa isku dhigma wixii diin leh. Abaa Jahalna ulbaa garabka u saaran oo kolkuu soo galaba wuu kugu bilaabayaa, ee orodoo Usaamata Ibnu Zayd guurso. Walaayada midna waa Caam midna waa Qaas. Qofka uu isaga waliga u yahay haduu yahay qof muslim ah, inuu isagana muslim yahay. Halkaas waxaa ka fahmeenaa adoon walaayo ma qaadi karo, qof waalan walaayo ma qaadi karo, cunug saqiir ahna walaayo ma qaadi karo.
Gabadha walaayadeeda la qaadayo haday muslimad tahayna axad gaala walaayadeeda ma qaadi karo. Markaas, waxaa la doonayaa muslimiinta in ay kala gartaan waxyaabaha maslaxada loo samaynayo, oo la doonayo in wax lagu maslaxeeyo iyo waxa xaqiiqo ahaan diinta ay doonayso. Taasi waa maslaxo, laakiin diinta waxa ay tahay markaa rabtid walaayo ma qaadi karaan dadkaasi.
Markaas walaayada gabadha waxaa qaadaya dadka Islaamka ah. Ee nin gabadhiisa marada asturkaa ku caayaya, oo mida gafuurka cagaaran lala tumanaya soo dhaweynaaya, ee gabadhiisa markey maro xijaab ah qaadato caaynaaya. Kaasi muxram ma noqon karo waayo nin walba inuu la ciyaaro ayuu doonaya. Sidaa darteed ragga maanta muxram noqon karta aduunka inay maanta ku nooshahay lama oga ilaa in yar oo faro ku tiris ah maahane. Walaayada qofka qaadaya muslimnimaa loo shardin, waa inuu salaada tukadaa, oo Ilaahey diintiisa ogolyahay, macaasiba iyo qalad haba ka dhaceene.
Qofka hadii danbi ka dhaco danbiga qofka laguma gaalaysiin karo, haduusan xalaashan danbigaas, ee waxaa loo shardinayaa inuu qofka Rabigiis aaminsanyahay, sunnadana uu ku socdo, oo shareecada islaamka ilaalinayo, qaladaadba ha ka dheceene. Qaali Islaami ayaa qaadaya hadii la helo. Hadii qaali Islaami la waayo sida maanta jirtaba, waxaa qaadi doona qofka muslimka ah oo dad ugu xiga gabadha, ha noqdo walaal, ama ha noqdo adeer, ama ha noqdo awoowe.
Hadii lawaayo waxaa qaadaya dariska Muslimiinta ah, oo ayada dariskeeda ah, sidaas ayaa lagu soconayaa. Waxaad ogaaneysaan inaan loo shardin walinimada cadaalo.
Qofka haduu fisqi iyo layimaado macaasi waa wayn, oo qamri cabid ka dhacday ama zino ka dhacday walaayada lagama qaadayo, oo looma shardiyo walinima caadilnimo rasmi ah, ee waxaa loo shardiyaa muslimnimo, qofka inuu muslim yahay. Qofka walaayadiisa laqaadayo haduu muslim yahay waaye. Wuxuu kaloo yiri Alle kor ahaaye: Ha uguurinina dadka gaalada ah ilaa intey ka rumeynayaan.
Yacni nimanka mushrikiinta ah gabdhaha ha uguurinina ilaa ay Islaam ka noqdaan. Siduu Alle oranaayo bal u fiirso.
Gabar muslimad ah, oo jirkeeda xifdida, oo diinta Alle ku socota in nin mujrim iyo faasiq ah loo guuriyo, ee saacada saqda dhexa qayilaad ku soo gaaraya, ama 24 saac sigaarka xabadba xabad ku daaraya, amase diinta Alleba ka soo horjeeda looma baahna. Laakiin ninka haduu yahay nin Ilaahey diintiisa ogol, oo salaada tukanaya, laakiin xaaraan uu sameynaayo waxyaabo qaladaada ku dhacaayo, gabadhu haday rabto waa la siin karaa, laakiin laguma qasbi karo.
Nin diin leh, aqlaaq iyo dabci fiican leh, haduu gabadha soo doono, oo ayada raali ku noqoto waan in la siiyo, waa waajib mana ladiidi karo. Haddii la diidana gabadha hortiisaa lagu meherinayaa. Waxaa diinta islaamka noo cadeysey inaan la ogoley guurka hadii aan wali jirin. Gabadha haddaan wali bixinin inaa nikaaxeedu aan ansaxeynin waxaa ku tagey dadka ahlu cilmigaa badankooda, asaxaabta Nebiga.
Waxayna asaxaabta kuligood qabeen sidaa. Raga fuqradaa waxaa sidaa ku dhawaaqay, oo ku taagtaagsadey iyaguna raga layiraahdo: Sufyaanu Zowri ow saaci,.
Waanad ogsoon tihiin halkay iiga taallo, waxaanan doonayaa inaan haddeer u guri geeyee, gabadhii waa taase dhisa. Waxaa weliba habboon in ninka xaaskiisa loo aqalgeliyo habeenkii kolkay dunidu degto dadkuna jabaqda dhigo. U noqo dhul, samo hakuu noqdee. U noqo dhab, udub dhaxaad ha kuu noqdee. U noqo jaariyad, addoon ha kuu noqdee.